Pet ukutya ibhegi mveliso e China
Ukutya kwenja Ukutya kwezilwanyana uBeyin epakisha ibhegi yokupakisha ukutya
Ngokwesiqhelo ibhegi yokutya kwenja kwimarike ifakwa kwiiplastiki. Mhlawumbi wonke umntu ucinga ukuba ezi ngxowa ziyafana, akukho mahluko, kodwa akunjalo. Ukupakishwa kokutya kwezilwanyana kunokwenziwa ngamanqanaba amabini, iileya ezintathu, okanye nokuba ziziqwengana ezine, masifunde ngakumbi ngalo.
Elungiselelweyo ikati ingca ikati ukunyanga ibhegi ukuphakheja
Iingxowa zengca yekati zisetyenziselwa ukubamba ingca yekati. Ubungakanani beengxowa zengca yekati busekwe kubungakanani beengxowa. Eyona nto isetyenziswa kakhulu kwiingxowa zengca zekati yi-PET / PE okanye i-BOPP / PE. Ngokweemfuno ze-matte okanye umphezulu ocwebezelayo, khetha iBOPP okanye iPET ngokwahlukeneyo. Sinokongeza uyilo lwefestile ebhegini, Ivumela abathengi ukuba bazi ngakumbi nge-intuitively ukuba yintoni ebhegini.
Umgangatho ophezulu we-foil ingxowa yokutya kweenja
Flat iingxowa ezantsi zezona uhlobo ibhegi ithandwayo ukuba iingxowa ukutya pet, oko ukubamba ukutya valume enkulu yezilwanyana, kwaye kujongeka intle kwi kwithala, oko enomtsalane.And ukuma iingxowa kunye neebhegi gusset icala zonke zithandwa ukutya kwezilwanyana izimuncumuncu.
Elungiselelweyo ibhegi yenkunkuma
Ingxowa yenkunkuma yekati inokuba yibhegi yokuma okanye ibhegi yegusset esecaleni okanye ibhegi esezantsi ethe tyaba, iingxowa zokuma zicebisa ukuba zibambe inkunkuma yekati encinci kunye nephakathi, kunye neebhegi zegusset esecaleni kunye neebhegi ezisezantsi zicetyisiwe ukuba zibambe ezinkulu Inokufakwa i-laminated by 2 layer, 3 layers or 4 layers.
Flat ibhegi uziphu yentlanzi ukutya
Ukutya kweengxowa zokutya kweentlanzi kuyanda kakhulu kule minyaka, Njengesilwanyana sokuhombisa, iintlanzi ziya zikhula zikhuliswa ngabantu njengezilwanyana zasekhaya, ezikhokelela kukutya kwentlanzi okuba yimveliso ethandwayo. Ukunceda iintlanzi zithathe ukutya okunezondlo, ukutya kwentlanzi kwenziwa ngakumbi nangakumbi. Ingxowa yokutya kwentlanzi inokunceda ekugcineni ukutya kwentlanzi ixesha elide kwaye igcine ukutya okutsha kweentlanzi.